Ny safidy tsara indrindra mankany CCleaner ho an'ny Ubuntu | Ubunlog
Ny safidy tsara indrindra amin'ny CCleaner ho an'ny Ubuntu
Raha mpampiasa Windows ianao dia azo antoka fa fantatrao CCleaner, fitaovana malaza manamora ny fanadiovana ny rafitrao, miaraka amin'ny tsindry iray monja, dia hikarakara ny famonoana ireo rakitra rehetra izay tsy mandray afa-tsy toerana tsy ilaina ao amin'ny rafitranao.
Ao anatin'ny esorin'ny CCleaner, atombohy amin'ny alàlan'ny fanovana sy famafana ireo rakitra tsy misy dikany manafaka toerana, diovy ny fitoeram-bokatrao, mametraha rakitra tsy maharitra ihany koa, mandehana amin'ny alàlan'ny lahatahiry ny mpizaha, mamafa izay rehetra notahirizina tao anaty cache, hamafana ihany koa ireo fisie vetivety amin'ny rindrambaiko sasany sy maro hafa.
Raha ho an'i Ubuntu ianao dia mety mieritreritra fa tsy misy fitaovana toy izany, fa avelao aho hiteny fa tsy izany, amin'ity indray mitoraka ityHararaotiko ny fizarana miaraka aminao ny sasany ireo safidy tsara indrindra mankany CCleaner ho an'ny Ubuntu.
Tsy toy ny Windows, Linux manadio ny fisie vonjimaika rehetra (voatahiry ao anaty / tmp) ho azy ireo.
1.1 Ahoana ny fametrahana BleachBit amin'ny Ubuntu?
2.1 Ahoana ny fametrahana Stacer amin'ny Ubuntu?
3.1 Ahoana ny fametrahana ny sweeper amin'ny Ubuntu?
Azo antoka fa iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra amin'ny Linux Ary avelao aho hiteny fa tsy voafetra ho an'ny Linux fotsiny izy io, fa manana ny kinikany koa hampiasaina amin'ny Windows.
BleachBit manana lisitra fampiharana maharitra manohana ny fanadiovana ary noho izany ity programa ity manome antsika ny safidy hamafana cache, cookies ary log log. Anisan'ireo toetra mampiavaka azy hitantsika:
GUI tsotra, zahao ireo boaty tadiavinao, zahao ireo ary esory.
Multiplatform: Linux sy Windows
Loharano malalaka sy malalaka
Nokiraoka rakitra mba hanafenana ny ao anatiny sy hisorohana ny fanarenana data
Manindry ny habaka kapila maimaim-poana hanafenana ireo rakitra efa voafafa taloha
Azo zahana ihany koa ny interface interface
Ahoana ny fametrahana BleachBit amin'ny Ubuntu?
Ho an'ireo kinova taloha BleachBit dia efa teo amin'ny rafitra tsy misy hatak'andro, fa raha tsy apetrakao io dia aza manahy na izany aza dia ao anatin'ny repositories ofisialy Ubuntu hametraka azy io dia mila manokatra terminal fotsiny isika ary manatanteraka ireto manaraka ireto:
Amin'ny faran'ny fametrahana dia mila manokatra ny rindranasa fotsiny isika ary mamaky ny safidy tsirairay azony rehefa manamarina ny boaty tsirairay amin'ity.
Efijery lehibe Stacer
Stacer dia fampiharana namboarina tao amin'ny Electron, miaraka amina fampiasa mpampiasa tena madio sy maoderina, ity dia hampiseho amintsika ny sehatr'asa miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fampiasana ny CPU, fahatsiarovana RAM, fampiasana kapila mafy, sns.
Con ny asany System Cleaner, mamela antsika hanafoana ny cache an'ny app, foana ny fako, miteraka tatitra momba ny olana, ny rafi-rafitra, ankoatry ny maro hafa. Izy io dia manana fiasa maro mitovy amin'ny atolotry ny CCleaner
Anisan'ireo mampiavaka ny Stacer hitantsika:
Dashboard hanomezana anao topy maso ny loharanom-pahalalana amin'ny rafitra
System Cleaner hanafaka toerana amin'ny tsindry iray
Tantano ireo fampiharana fanombohana ao amin'ny Ubuntu hanatsarana ny zava-bita
Mitadiava sy tantano ny serivisy, daemon
Mikaroha ary esory ny rindrambaiko hanafoanana toerana
Ahoana ny fametrahana Stacer amin'ny Ubuntu?
Ity rindranasa ity dia manana tahiry ofisialy ka noho ny fametrahana azy dia tsy maintsy manatanteraka ireto manaraka ireto fotsiny izahay:
Sweeper Fitaovana iray izay hitantsika ao amin'ny Kubuntu izanyNa dia ampahany ao amin'ny KDE manokana aza izy io, dia afaka mitantana mora foana ny fanadiovana ny rafitrtsika isika.
Izy io dia manana GUI tsotra sy tsotra miaraka aminy isika dia afaka misafidy fepetra sasany amin'ny fomba iray ary hiandraikitra ny fitadiavana ireo rakitra sy lahatahiry poakaty rehetra ireo, rohy tapaka, fidirana ao anaty menio izay tsy manondro programa na doka mitovy.
ny ireo fiasa lehibe Izy ireo dia:
hamafa ny dian-tranonkala mifandraika: cookies, tantara, cache
esory ny cache thumbnail
manadio fampiharana sy tantaran'ny antontan-taratasy
Ahoana ny fametrahana ny sweeper amin'ny Ubuntu?
Araka ny efa nolazaiko dia ampahany amin'ny KDE izy io, ka hitantsika ao amin'ny Kubuntu izany, fa raha mampiasa an'ity tontolo ity ianao dia sokafy fotsiny ny terminal ary ataovy izao baiko manaraka izao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Ny safidy tsara indrindra amin'ny CCleaner ho an'ny Ubuntu
Luis Javier dia hoy izy:
Mampiasa ubucleaner aho ary miasa tsara
Valiny tamin'i Luis Javier
Heveriko fa tsy hita ny iray: Ubuntu-Cleaner izay noresahinao tamin'ny taon-dasa.
Newsroom, CLI maoderina hamaky ny vaovao tianao ao amin'ny Ubuntu
Ahoana ny fametrahana Kanboard amin'ny Ubuntu